Mgbaasị megide ụmụ nwanyị - mba 10 kacha njọ
N'agbanyeghị ọganihu dị egwu n'ụwa nile, nsogbu ndị siri ike nke ịkpa ókè megide ụmụ nwanyị ndị dịrịlarị kemgbe ọtụtụ narị afọ gara aga.
Foto nke nwanyị nke narị afọ nke 21 nwere obi ike, ihe ịga nke ọma, na-egbuke egbuke na ịma mma. Ma maka ọtụtụ n'ime ijeri 3,3 ndị inyom mara mma nke bi na mbara ala anyị, uru nke narị afọ nke ndị na-eji cybernetics anọgide na-enweghị ihe ịga nke ọma. Ha nọgidere na-enwe ọtụtụ narị afọ nke ime ihe ike, mmegbu, ịdị iche iche, amaghị ịgụ ihe ike na ịkpa ókè.
"Ọ na-eme n'ebe nile," ka Taina Bien-Aime, onye isi oche nke New Elementity Equality Now na-ekwu. "Ọ dịghị mba ebe nwanyị nwere ike iche na ọ nweghị nchebe."
N'agbanyeghi ọganihu siri ike maka ikike ụmụ nwanyị gburugburu ụwa - iwu ndị ka mma, itinye aka na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, agụmakwụkwọ na ego - nsogbu na-akpata nsogbu mmechuihu nke ụmụ nwanyị nke dịworo kemgbe ọtụtụ narị afọ. Ọbụna na mba ndị bara ọgaranya, enwere ihe mgbu nke onwe, mgbe a na-echebeghị nwanyị, ma wakpo ya.
Na mba ụfọdụ - dịka iwu, na ndị dara ogbenye na ndị kasị emetụta agha, ọkwa nke ime ihe ike ruru ogo dị otú ahụ na ndụ ụmụ nwanyị na-aghọ ihe a na-apụghị izere ezere. Ndị bara ọgaranya nwere ike iburu ha iwu nchegharị ma ọ bụ kpochapụ nsogbu nke usoro nchebe nke ndị na-enweghị nchebe n'okpuru ndị kapeeti. Ná mba ọ bụla, nwanyị nke gbara ọsọ ndụ bụ otu n'ime ndị kachasị ike.
Nsogbu ndị a juru ebe nile na ọ na-esiri ike ịhapụ ebe kachasị njọ maka ụmụ nwanyị nọ n'ụwa. N'ọmụmụ ihe ụfọdụ, a na-enyocha nsogbu ha site na ịdị mma nke ndụ, na ndị ọzọ - site n'aka ndị ahụike. Otu dị iche iche maka nchebe nke ikike ụmụ mmadụ na-ezo aka ná mba ebe oke mmebi iwu dị otú ahụ na-emenụ, na ọbụna igbu mmadụ dị ka ihe n'usoro ihe.
Akwụkwọ edemede bụ otu n'ime ihe kachasị mma maka ọnọdụ ụmụ nwanyị nọ na mba ahụ. Mana, dị ka Cheryl Hotchkiss si kwuo, onye so na ngalaba nke Canada maka mgbasa ozi maka ikike ụmụ nwanyị bụ Amnesty International, nanị ụlọ akwụkwọ anaghị ezuru iji dozie nsogbu nke mmụta nhata.
"Nwaanyị chọrọ inweta agụmakwụkwọ chere ọtụtụ nsogbu dị iche iche," ka ọ na-ekwu. "Mmụta nwere ike ịnwe n'efu ma bụrụ ọnụ, ma ndị nne na nna agaghị eziga ụmụ ha nwanyị n'ụlọ akwụkwọ ma ọ bụrụ na ha nwere ike ịdọrọ ha ma dinaa ha."
Ahụike bụ ihe ngosipụta ọzọ. Nke a na-agụnye ilekọta ụmụ nwanyị dị ime, ndị a na-amanye mgbe ụfọdụ ka ha soro na-ebute alụmdi na nwunye di na nwunye ma na-amụ ụmụ, na-ebutekwa ọrịa AIDS. Ma ọzọ, ọnụ ọgụgụ enweghị ike igosi foto ahụ dum.
"N'elu ọdọ mmiri dị na Zambia, ezutere m otu nwanyị nke na-agwaghị di ya na ya bu nje HIV," ka David Morley, bụ onye isi oche nke alaka ụlọ ọrụ Save the Children, David Morley kwuru. "Ọ dịla ndụ na nsọtụ, ebe ọ na-enweghị nwa. Ọ bụrụ na ọ gwara di ya, a ga-achụpụ ya n'àgwàetiti ahụ ma zigara ya n'ala. Ọ ghọtara na ya enweghị oke nhọrọ, n'ihi na enweghi ihe ziri ezi. "
Ndị na-akwado na-ekweta na iji meziwanye ndụ ụmụ nwanyị na mba niile, ọ dị mkpa inye ha ikike. Ma mba ndị kasị daa ogbenye n'Africa, ma ọ bụ obodo kachasị ike nke Middle East ma ọ bụ Asia, enweghị ike ịhazi ọdịmma nke aka ya bụ ihe na-ebibi ụmụ nwanyị site na nwata.
N'okpuru ebe a, m ga depụta ndepụta nke mba iri nke ga - abụ nwanyị taa bụ ihe kacha njọ:
Afghanistan : N'ikpuru, otu nwanyị Afghan bi afọ 45 - nke a bụ otu afọ na-erughị nwoke Afghan. Mgbe afọ iri atọ nke agha na nkwenkwe okpukpe, ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị inyom enweghị ọgụgụ isi. Ihe kariri ọkara nke ndị inyom ọ bụla erubeghị afọ iri na isii. Na ọkara ọkara otu nwanyị na-anwụ mgbe ọ na-amụ nwa. Ime ihe ike n'ime ụlọ juru ebe niile na pasent 87 nke ndị inyom na-ekweta na ha na-ata ahụhụ na ya. N'aka nke ọzọ, e nwere ihe karịrị otu nde ndị inyom di ha nwụrụ n'okporo ámá, a na-amanyekarị ịkwa iko. Afghanistan bụ mba naanị ebe ọnụ ọgụgụ ndị inyom na-egbu onwe ha dị elu karịa ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ na-egbu onwe ha.
Democratic Republic of the Congo : na mpaghara ọwụwa anyanwụ nke Democratic Republic of Congo, agha dara, na-ekwu na ihe karịrị nde mmadụ 3, na ndị inyom na agha a na-aga n'ihu. Mmeko nwoke na nwanyi bu ndi na-achoputa umuaka. Ọtụtụ ndị na-anwụ anwụ, ndị ọzọ na-ebute nje HIV ma nọrọ naanị ha na ụmụ ha. N'ihi mkpa ọ dị iji nweta nri na mmiri, a na-etinyekarị ụmụ nwanyị na-eme ihe ike. Enweghi ego, enweghị njem, enweghị njikọ, a pụghị ịzọpụta ha.
Iraq : agha agha nke United States na Iraq iji "tọhapụ" mba ahụ site na Saddam Hussein emeela ka ụmụ nwanyị banye n'ọkụ mmụọ nke ime ihe ike òtù. Ogologo akwukwo mmuta - nke kachasi elu n'etiti mba ndi Arab, adalatala na ala di ala, n'ihi na egwu na-atụ ndi ezigara umu nwanyi n'ulo akwukwo, na-atu egwu na ha nwere ike idina ha ma dina ha n'ike. Ụmụ nwanyị ndị na-arụ ọrụ na-anọdụ n'ụlọ. A chụpụrụ ihe karịrị nde nwanyị n'ụlọ ha, ọtụtụ nde mmadụ enweghịkwa ike ịrụ ọrụ ha.
Nepal : ịlụ di ma ọ bụ nwunye n'oge na-amụ nwa na-eme ka ndị inyom na-adịghị edozi nke mba ahụ mebie, otu n'ime mmadụ 24 na-ala n'iyi n'oge ime ma ọ bụ mgbe a na-amụ nwa. A pụrụ ire ndị inyom na-alụbeghị di tupu ha eruo okenye. Ọ bụrụ na nwanyị di ya nwụrụ natara aha ahụ bụ "bokshi", nke pụtara "onye amoosu," ọ na-eche ihu ọma na ịkpa ókè. Obere agha obodo n'etiti gọọmentị na ndị nnupụisi nke ndị Maoist na-eme ka ụmụ nwanyị ndị inyom na-agbata onwe ha banye n'òtù ndị agha.
Sudan : N'agbanyeghi na umunwanyi Sudan nyere ufodu uzo di mma n'ihi iwu ndi nhazigharita, ida ndi inyom Darfur (West Sudan) ka na-akawanye njọ. Mkpuru mmadu, mmeko nwoke na mmanye mmanu kemgbe afo 2003 ebibila ndu nke ihe kariri nde nwanyi. Ndị Janjaweeds (ndị agha Sudan) na-eji mmeko nwoke eme ihe mgbe nile dị ka ngwá agha ndị mmadụ, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume inweta ikpe ziri ezi maka ndị a na-akpagbu.
N'etiti mba ndị ọzọ ebe ndụ ụmụ nwanyị dị njọ karịa ndụ ụmụ nwoke, e depụtara Guatemala, ebe ụmụ nwanyị sitere na ndị kasị nta na ndị kasị daa ogbenye nke ọha mmadụ na-ata ahụhụ site n'ime ime ihe ike n'ụlọ, mmeko nwoke ma nwee nsogbu nke abụọ nke HIV / AIDS n'etiti mba ndịda Sahara. Ná mba ahụ, ntiwapụ nke igbu ọchụ ndị jọgburu onwe ha, nke a na-emebughị, na-agbakasị, bụ ebe e gburu ọtụtụ narị ndị inyom. Na nso ozu nke ụfọdụ n'ime ha na-ahụ ihe ndị jupụtara n'ịkpọasị na enweghị ndidi.
Na Mali, otu n'ime mba kacha daa ogbenye n'ụwa, ndị inyom ole na ole na-achịkwa iji zere ibi úgwù na-egbu mgbu nke akụkụ ahụ, ọtụtụ na-amanye ịbanye n'alụmdi na nwunye mbụ, otu n'ime ụmụ nwanyị iri na-anwụkwa n'oge ime ime maọbụ mgbe a na-amụ nwa.
N'akụkụ ókèala agbụrụ dị na Pakistan, a na-etinye ụmụ nwanyị n'ike n'ike dịka ntaramahụhụ maka mmejọ ndị mmadụ mere. Ma, ihe ka njọ bụ igbu ọchụ nke "asọpụrụ" na ọgbọ ọhụrụ okpukpe extremism, nke ebumnuche maka ndị inyom na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, òtù ụmụ mmadụ na ndị ọkàiwu.
Na mmanụ bara ọgaranya Saudi Arabia , a na-emeso ndị inyom dị ka ndị na-adabere na ndụ oge nile n'okpuru nlekọta nke onye ikwu nwoke. Enwere ikike iji ụgbọala ma ọ bụ na-ekwurịta okwu n'ihu ọha na ụmụ nwoke, ha na-ebi ndụ dị oke oke, na-ata ahụhụ site na ntaramahụhụ siri ike.
N'isi isi obodo Somalia, obodo Mogadishu, agha agha di oke egwu etinyewo ndi inyom, ndi a na-ele anya na ha bu ndi isi nke ndi ezinulo ha. N'etiti ndị mmadụ, ụmụ nwanyị na-akwagide n'ike n'ike kwa ụbọchị, na-ata ahụhụ site na nchebe na-adịghị mma mgbe ha dị ime ma ndị agha na-eji ngwá agha na-awakpo ha.
"Ọ bụ ezie na a maara mba ndị inyom na mba ụwa," ka Director General General Health Organisation, Margaret Chan, kwuru, "ọ gaghị emezu ruo mgbe ọnọdụ ndụ dị na mba na obodo dị mma, na-achọkwa mgbanwe mgbanwe. Ọtụtụ ihe dị mgbagwoju anya, nke a na-agbanye n'ahịrị na omenala, na-anọgide na-egbochi ụmụ nwanyị na ụmụ agbọghọ ịghọta ikike ha nwere ma rite uru na ọganihu mmadụ. "
Gịnị mere di m jiri m tụnyere ụmụ nwanyị ndị ọzọ?
Ajọ nke nwanyị siri ike
Olee otú ịmụta nwunye iji nwee mmasị n'ebe di ya nọ?
Kedu ụdị ụmụ nwanyị na-eme ka ụmụ nwoke na-enye onyinye?
Esi ewee obi ụtọ n'oge mgbụsị akwụkwọ
Narcissism ma ọ bụ ịhụnanya onwe-ya?
Enweghi alụmdi na nwunye - nwanyi toro
Usoro ọgwụgwọ nke ọkụ na ụmụ ọhụrụ na ụmụ ọhụrụ
Buns na cinnamon na shuga
Champagne nwere ihe ijuanya
Salad na tuna na agwa
Ya onwe ya onye na-manya mmanya: mmanya si na mkpụrụ vaịn n'ụlọ
Ọgwụgwọ ndị mmadụ maka ọdịda akụrụngwa
Anyị na-eji mmiri mmiri ozuzo maka ịmaliteghachi
Salad si Snack
Na-atọ ụtọ na mara salad "Ero Glade"
Mmekọahụ na enweghi afọ ojuju
Ememme Afọ Ọhụrụ-2017 maka afọ nke Onye Rooster na aka aka ha site na ngwa, akwụkwọ na ákwà maka usoro. Esi eme ka bọọlụ na-adọrọ adọrọ na ọkụ ọkụ na osisi Krismas maka ụlọ akwụkwọ ọta akara na ụlọ akwụkwọ: ụmụ klas na foto na vidiyo
Mgbaghara na - adịbeghị anya - a na-egbuke egbuke-2016
Ekele nne m na March 8
Risotto na ose bell
Na ihe ị ga-eji na-eme ka ndị sneakers na-eri osisi na ụbịa na mmiri, oyi na ọkọchị: 30 foto nke ihe oyiyi ejiji
Chicken na soy ihendori
Mastopexy nke ara (ebuli nku)